Mivoatra ny hazavana sy ny aloka ho amin'ny zava-kanto, manome toerana ho an'ny fiainana | Famolavolana Pincushion - Faucets lakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Mivoatra hazavana sy aloka amin'ny zavakanto, manome toerana ambony ny fiainana | Pincushion Design
Mivoatra hazavana sy aloka amin'ny zavakanto, manome toerana ambony ny fiainana | Pincushion Design
2021 / 06 / 07 FisokajianaInterior design 6878 0
Sampan-draharaha momba ny famoronana anatiny
Ahoana ny fitazonana ny hatsaran-tarehiny intuitive amin'ny tetikasa vaovao? Mba hahazoana ny fahatsapana ny ambaratonga miasa marina? Ny endrika dia avy any ivelany, ny estetika dia avy any ivelany. Ny fitadiavana trano tonga lafatra dia mitovy amin'ny fitadiavana ny vady sahaza anao tonga lafatra. Ny famoronana ny mpamorona dia hita taratra amin'ny sedimentation ny lasa. Rehefa avy namaky ny hatsarana sy ny fanambinana rehetra ary niaina ireo zava-niseho eran'izao tontolo izao izahay dia manokatra hatrany ny fetran'ny sehatra.
Ny filozofa alemanina Heidegger indray dia nanoratra ny eritreriny momba ny habakabaka tao amin'ny "Building - Living - Thinking": "Ny sisintany no fiandohana amin'ny fiainana fa tsy ny teboka farany, izay misy zavatra manomboka ny fisiany tena ilaina". Izahay dia mijery ny fifandraisana misy eo amin'ny olona sy ny tranony, manomboka amin'ny fijerena habaka iray ka hatramin'ny fahitantsika an'izao tontolo izao? Ho an'izao rehetra izao? Ahoana no fahitantsika ny toeram-ponenana?
Ny fanombohan'ny boky matetika no fotoana andrasana indrindra. Manakaiky ny maritrano avy amin'ny zava-misy mahazatra an-tanàn-dehibe isika, miditra amin'ny atitany ary manomboka dia vaovao amin'ny alàlan'ny fotoana sy toerana. Ny estetika estetika dia ny mamoaka ny fiangavian'ny hazavana sy ny aloka, ary avy eo ny hazavana dia lasa zavakanto. Ny sain'ny habakabaka dia aharihary eo amin'ny fisehosehoana, hatrany ivelany ka hatrany am-pandinihana, amin'ny fikarohana na amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Izay rehetra liana, manasitrana ary mampatsiahy dia tafiditra ao anaty. Ny fihetseham-po dia mifamatotra sy mifampiresaka amin'ny famolavolana anatiny, jiro, zavakanto ary fiainana, mitsofoka tanteraka ao an-tsaina sy vatana. Ny habaka ankapobeny dia mampiasa fotsy, volondavenona ary manga amin'ny fomba marina. Somary misy loko voasarimakirana malefaka mampiseho ny hery mitsambikina ao anaty atmosfera milamina sy milamina.
Ny toetra ara-panahy no soatoavin'ny habaka, manome ny toetr'andro maha-olombelona ny tanàna. Manantena izahay fa ny olona dia tsy afaka mihaona ny seho ho avy amin'ny habaka an-tanàn-dehibe ihany, fa manantena ihany koa fa izany dia tranokala fifandraisana izay nandaminana ny maritrano, ny kanto, ny mahaolona ary ny natiora amin'ny fomba milamina. Hihaona eto ny olona sy ny olona, ​​ary hanomboka ny dia ataon'ny olona izy ireo, hizaha sy hankasitrahana ny dikan'ny hatsarana samy hafa amin'ny fiainam-bahoaka.
Mialà amin'ny fifandraisana misy loko sarotra, dia mijery ny hatsaran-tarehy tany am-boalohany amin'ireo fitaovana ao anaty habakabaka isika, ary avy eo nanapaka ny fomba fiainana Wuhan hahita ny làlan'ny famolavolana. Milamina ao anatiny, mangina, mangarahara ary maivana. Eto, ny olona dia mila mahatsapa fotsiny, hahazoana hery amin'ny fotoana mangina miaraka aminy.
Ny faritra fifampiraharahana dia mampiasa ny fifandraisan'ny rafitra symmetrika, ny fifandraisana mikoriana eo amin'ny atiny sy ivelany ny habakabaka ary ny valindrihana vy tsy misy fangarony rano hanehoana ny maodelin'ny hazavana, mba hampitombo ny tranokala mba hahafahan'ny olona miditra amin'ny fahatsapana dimy amin'ny karazany maro. traikefa, ary noho izany mamorona lojika fitantarana ao anaty habakabaka.
Ny sakana mitoka-monina ao amin'ny faritry ny ankizy dia fametrahana am-boalohany izay manako ireo sakana Lego mifampiresaka. Avy eo dia mifototra amin'ny traikefa azo tsapain-tanana momba ny hatsarana sy zavakanto, ary ny fanaparitahana ny fahatsapana ho intuitive mba handaminana ny atmosfera milamina sy mitovy. Eo amin'ny lafiny am-baravarankely, misy varavarankely fitaratra hatramin'ny rihana manontolo. Izy io dia manala ny fetran'ny fetra eo amin'ny atiny sy ivelany, izay ifanakalozana ny fomba fijery.
Ny loko maizina sy mazava, matanjaka ary maivana dia mitohy ao amin'ny faritra VIP, mamorona karazana herin'ny fidirana an-tsehatra, mamorona firaisan-kina milamina sy milamina.
Ny rakipeo zorony misy jiro miendrika boky dia miako sy mifangaro amin'ny endrika voajanahary ao amin'ny habakabaka, ary miaraka izy ireo dia lasa loharanon-kery ho an'ny "fanitarana" tsy manam-petra ny habaka miaraka amin'ny fanomezam-boninahitra ara-panahy.
Ny fahatsiarovana ny toerana dia avy amin'ny fandaminana fitaovana. Ary ny fanaraha-maso marina ny fandaminana no zava-dehibe indrindra. Ity dia lojika azo takarina sy tsapa. Ny volavolan-drafitra ankapobeny amin'ny drafitra fametrahana toerana, ny drafitra isam-paritra, ny maritrano, ny atitany, ny jiro, ny jiro, ny rafitra, ny fantson-drano, ny herinaratra, ny fanafanana, ny faharanitan-tsaina, ny signage ary ny fitarihan'ny asa manontolo, ny rafitra iray manontolo, ary ny fizotrany rehetra dia miara-miasa. Ny fiheverana ankapobeny ny tsirairay dia miteraka traikefa feno amin'ny habakabaka ary farany dia maneho ny vokany feno sy miray toerana.
Anaran'ny tetikasa ｜ Golden Glory (Central China Region) Birao fivarotana tetik'asa eran-tany
Adiresin'ny tetikasa ｜ Hubei-Wuhan
Sokajy Tetikasa ｜ Ivontoeran'ny varotra
Faritra tetikasa ｜ 850㎡
Famaritana ara-pitaovana ｜ Takelaka vita amin'ny gorodona vita amin'ny vato, veneer hazo, vy vy, vato artifisialy
Mpamolavola tetikasa ｜ Pang Yifei, Yang Wanyu, Tong Xiaochun, Chen Qianyu
Mpanamboatra tetik'asa ｜ Zhou Yang, Zhan Xinxi
Mpakasary sary Space Xiao Xiang
Pinchen Design dia natsangana tamin'ny 2001 tao Chongqing. Manana traikefa amin'ny famolavolana 19 taona izy ary manana ekipa mpamorona olona maherin'ny 100 miasa miaraka. Nahazo loka iraisam-pirenena marobe izy ary mifantoka amin'ny trano sy trano lafo vidy, trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny, sekoly, ary toerana hafa ny serivisy famolavolana azy. Nandritra ny taona maro niainany, Pinchen dia nanjary orinasa nasionaly ho an'ny famolavolana anatiny, ary izao Pinchen dia nifindra avy tany amin'ny faritra ary tonga tany Shenzhen, nanatanteraka paikady roa foibe. Mampiasa fitaovana hitondrana fihetseham-po izahay ary hampiasa hazavana sy aloka handraisana fotoana. Mangataka aingam-panahy avy amin'ny natiora isika, mampiasa ny volavolan-tany hanovana fiainana iray, hanodinkodinana ny fahalotoam-pitondrantena sy ny fahasosorana ary hanomezana hatsaran-tarehy ho an'ny fiainana. Miaraka amin'ny toe-tsaina feno maha-olona indrindra, milaza ny tantaran'ny habakabaka izahay, manantena ny hahatsapa tsy ny famolavolana ihany, fa koa ny fampidirana zavakanto sy ny fikarohana tantara. Ary manolo-tena izahay hanome vahaolana famolavolana tokana, amin'ny alàlan'ny famakafakana sy ny fikarohana, hanomezana ny valiny manan-tsaina indrindra amin'ilay tetikasa.
Previous :: Ny famaritana ny fahatakarana sy ny rendrarendra, ny fandikana ny toerana mahafinaritra toa ny zavakanto | TT Design Next: Sahirana, mpanaingo no nanome ireto famolavolana vavahady manaitra ireto
2021 / 08 / 15 3384
2021 / 08 / 15 4286
2021 / 08 / 15 3776
2021 / 08 / 14 3490
2021 / 08 / 14 3902
2021 / 08 / 14 3299